Uru nke igwe anaghị agba nchara na nka ọha
Site na usoro mmepe, a na-emepụta ma mepụta nka ọha na-adabere na mmepe na-aga n'ihu nke ọha mmadụ, akụ na ụba na ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Site na ngbanwe nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya na ọdịbendị ọdịbendị, akụkụ nke ọrụ ọha na eze agbanweela mgbanwe ụfọdụ. Dị ka stai ...
Kedu ụdị ihe ọkpụkpụ na-achọ obodo ukwu?
Dị ka ọrụ nka na ebe ọha na eze, nnukwu ihe osise a na-eme n’obodo mepere emepe bụ mmewere nke gburugburu obodo mepere emepe, ngosipụta gbasiri ike nke uto ọdịbendị ndị mepere emepe, na akara ngosi dị mkpa nke mmụọ obodo mepere emepe. Site na mmụba na-aga n'ihu nke nghọta ndị mmadụ na ọchịchọ maka ọdịbendị mepere emepe na ụlọ mmanya ...
Tydị na ụdị ihe ọkpụkpụ
A na-ekekarị ihe ọkpụkpụ ụzọ abụọ: ihe ọkpụkpụ na enyemaka. 1. Ihe ọkpụkpụ Ihe a na-akpọ ihe ọkpụkpụ na-ezo aka n’ihe osise nwere akụkụ atọ nwere ike igosi ekele maka ya n’ọtụtụ ụzọ na akụkụ. E nwekwara usoro na ụdị dị iche iche, gụnyere nke ezi uche dị na ya na nke ịchọ mma, co ...